20 Mitambo uye Zvishandiso Mahara kune Yakatemwa Nguva (Ndira 5) | IPhone nhau
Nhasi ihwo "Husiku hwegumi nembiri"; Zviuru zvevana, uye kwete zvakadaro vana, vanomirira nemufaro uye kusashivirira kweVarume Vatatu Vakangwara kubva kuMabvazuva kuti vauye navo zvipo. Zvichakadaro, vamwe vedu vatove vakuru, isu hatina chekutarisira nhasi manheru, asi isu tinogona kutora mukana kuwana zvimwe yemahara mitambo uye kunyorera kwedu iPhone uye iPad zvishandiso.
Rangarira kuti iyo mitambo uye maapplication auchaona pazasi anobhadharwa asi, panguva ino, ivo vari mahara kwenguva pfupi izvo zvinoreva kuti isu tinogona kungovimbisa chete kuvimbika kwechipo panguva yekutsikisa ichi posvo asi, kubva ipapo zvichienda mberi, zvinoenderana neanogadzira uyo asina kuzivisa kusvika paanochengetedza kukwidziridzwa. Naizvozvo, iwe unofanirwa kunge uchikurumidza kuti uzviwane.
1 Instant Collage - foto & pikicha mugadziri
2 AceCam Annivers Greetings Pro - Mhedzisiro yeMifananidzo ye Instagram
3 Auto Chinja
4 Zera reOttoman
5 Iyo Inotyisa Nhau: Dangerous Adventure
6 Inotyisa Nhema & Chena HD
7 Wallpaper FX - Blur uye Ruvara Rako Mapikicha & Mahure
8 Matthew Henry Commentary ne Audio - 31,102 mavhesi eBhaibheri akatsanangurwa
9 noPhone Hora
10 Imbwa Kununura Mission (Bhuku # 4 - Kutendeseka) - Neon Tiki Tribe - Chirungu Chinyorwa
12 Office Suite - Yega Yega
13 Splashy Mvura Tracker - Inwa imwe mvura ...
14 BHANGI! [HD] Official Video Mutambo
15 Runako uye Chikara HD - Inopindirana Yekurara Nguva Bhuku reNhau
16 Binaural Kugadzira Beats - Kufungisisa Inzwi
17 Zen Sketch - Unyanzvi hwekudhirowa uye kupenda
18 Karenda Yevhiki
19 Rwendo Rwakadzika: Chitsauko Chekutanga
20 Cheetah Cherechedzo - Tarisa & Widget Cherechedzo
Instant Collage - foto & pikicha mugadziri
Pakarepo collage Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
AceCam Annivers Greetings Pro - Mhedzisiro yeMifananidzo ye Instagram
AceCam Anniversary Kukwazisa Pro Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Auto Chinja Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Zera reOttoman Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Iyo Inotyisa Nhau: Dangerous Adventure
Iyo Inotyisa Nhau: Dangerous Adventure Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Inotyisa Nhema & Chena HD
Inotyisa Nhema & Chena HD Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Wallpaper FX - Blur uye Ruvara Rako Mapikicha & Mahure
Anwendung ichi Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Wallpaper FX - Blur uye Ruvara Rako Mapikicha & Mahurevakasununguka
Matthew Henry Commentary ne Audio - 31,102 mavhesi eBhaibheri akatsanangurwa
Matthew Henry Commentary ne Audio Iine mutengo wenguva dzose we5,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
noPhone Hora Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Imbwa Kununura Mission (Bhuku # 4 - Kutendeseka) - Neon Tiki Tribe - Chirungu Chinyorwa
Imbwa Kununura Mission Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Waykup Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Office Suite - Yega Yega
Office Suite - Yega Yega Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Splashy Mvura Tracker - Inwa imwe mvura ...
Splashy Mvura Tracker - Inwa imwe mvura ... Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Splashy Mvura Tracker - Inwa yakawanda mvura, Teedzera zuva nezuva kumwa kwemvura, Tora hydration chiyeuchidzovakasununguka
BHANGI! [HD] Official Video Mutambo
BHANGI! [HD] Official Video Mutambo Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Runako uye Chikara HD - Inopindirana Yekurara Nguva Bhuku reNhau
Runako uye Chikara HD - Inopindirana Yekurara Nguva Bhuku reNhau Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Binaural Kugadzira Beats - Kufungisisa Inzwi
Binaural Kugadzira Beats - Kufungisisa Inzwi Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Zen Sketch - Unyanzvi hwekudhirowa uye kupenda
Zen Sketch - Unyanzvi hwekudhirowa uye kupenda Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Zen Sketch2,29 €
Karenda Yevhiki Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Rwendo Rwakadzika: Chitsauko Chekutanga
Rwendo Rwakadzika: Chitsauko Chekutanga Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Rwendo Rwakadzika: Chitsauko Chekutanga5,49 €
Cheetah Cherechedzo - Tarisa & Widget Cherechedzo
Cheetah Cherechedzo - Tarisa & Widget Cherechedzo Iine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 20 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 5)
Ikozvino inowanikwa yeIOS iyo saga yese yeMega Man mitambo